Rasmi: filimka Padman iyo maalintiisa labaad ganacsiga wacan ee uu sameeyay – Filimside.net
Rasmi: filimka Padman iyo maalintiisa labaad ganacsiga wacan ee uu sameeyay
February 11, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: February 11, 2018
Superstar Akshay Kumar filimkiisa Padman ayaa 35% sare u kac sameeyay maalintiisa labaad wuxuuna keenay 13.50 Crore asigoo mudo labo maalmood ah soo xareeyay 23.50 Crore (Trade Figure).
Ma jiraan filimo badan oo maalintooda labaad sare u kac 35% sameeyaan hadii maalintooda kowaad ku furmaan ganacsi 10 Crore ka bilaabanayo waxayna midaan muujineysaa in daawadayaasha loogu tala galay Padman ay ka heleen fariintiisa.
Padman wuxuu sare u kac waali ah ka sameeyay Mumbai iyo hareeraheeda sidoo kalena Koonfurta Hindiya si heer sare ah ayuu kaga gadmayaa xitaa Toilet Ek Prem Katha ayuu halkaas kaga wanaagsan yahay maalintiisa labaad.
Waqooyiga Hindiya kuma xoogano filimka Padman inkastoo Akshay Kumar suuqaan awooda ugu balaaran ku leeyahay sababtana waxay tahay fariinta filimkaan reer Waqooyiga masoo wada dhaweynin xoogaana fariinta waxaa laga soo min guuriyay Koonfurta si kastabe Padman Delhi ganacsigiisa wuu wacan yahay balse East Punjab iyo UP ayuu ku liitaa.
Fadlan hoos kaga bogo Padman mudo labo maalmood ganacsiga uu sameeyay oo ay soo daabacday shabakada Boxoffice India:
Jimco – 10 Crore (Qiyaas)
Sabti – 13.50 Crore (Qiyaas)
Wadarta Guud – 23.50 Crore (Trade Figure) (Qiyaas)
Dhinaca kale hoos kaga bogo Padman mudo labo maalmood ganacsiga uu sameeyay oo ay soo daabaceen kooxda iska leh laguna xusay boga Taran Adharsh Twitter-ka ku leeyahay:
Jimco – 10.26 Crore
Sabti – 13.68 Crore
Wadarta Guud – 23.94 Crore (Producer Figure)
Ugu dambeyntii shabakada Boxoffice India waxay soo bandhigtay Akshay Kumar filimadiisa ugu dambeeyeen iyo maalinta labaad mid walbo sare boqoleey ahaan sare u kaca uu sameeyay:
Toilet Ek Prem Katha – 46%
Padman – 35%
Jolly LLB 2 – 34%
Airlift – 31%
Sidaa darteed Padman waa filimka labaad ee sare u kaca ugu wacan sameeyo maalintiisa labaad filimada Akshay Kumar dhawaanahan sameeyay rajadana ma xumo maanta oo Axad ahna waxaa laga filaa markale inuu sare u kac wacan sameeyo.
Waxaa Aqrisay 933
Zhp Saki flmkan sidee buu ku guuleysan karaaa ama hit dhameestiran ku noqon karaah
Taasi isweyn diin malahan inuu guuleesanayo waa 21 Crore ayaa sameyntiisa ku baxday oo aysan ku jirin lacagaha Akshay filimada ku sameeyo madaama uu soo saare ka yahay, laakiin dooda waxay tahay inuu 100 Crore gaaro hadii uu gaaro waayo ganacsigiisa waa niyad jab marka laga cabir qaato maqaamka Akshay Kumar maanta taagan tahay.
Zaki sxb waxad so qortay in filamkan lagu sameeyay 21 cr lakin shabakadaha waxeey so qoreen in lagu sameeyay 70 cr se wax u jiran ?
Waxan ka hadlayaa Production Cost ama lacagta tooska loogu sameeyay waa 21 Crore ee kama hadlin miisaaniyada guud ku baxday hadii sidaas la dhaho waxaa lagu daraa lacagaha kooxda cajaladaha qeybiyaan ku iibsadeen ama Akshay Kumar qiimaha uu lacagta ku sameeyo (Market Value).
Midaas ayaan ka hadlay sxb waxaa macquul ah inaad aragtay shabakad wax walbo isku dartay oo hal miisaaniyad soo saartay, laakiin Padman ma ahan filim 70 Crore lagu sameeyay mana u eko.